ठेकदारलाई गृहमन्त्रीको चेतावनी : जो कसैको घरधनी होस्, कारबाही गर्छौं ! – मुलधार न्युज
Home > समाचार > ठेकदारलाई गृहमन्त्रीको चेतावनी : जो कसैको घरधनी होस्, कारबाही गर्छौं !
२३ जेष्ठ २०७५, बुधबार २०:५९
काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले काम नगर्ने ठेकदारलाई कारबाही गरि छाड्ने दृढता व्यक्त गरेका छन् ।
सम्झौताअनुसार समयमा काम नगर्नुलाई राज्यले अपराध मान्ने भन्दै उनले काम नगर्ने ठेकदार कसैको घरधनी मात्र होइन, सांसद वा नेता भएपनि नछाड्ने बताए ।
तर, यस्ता कामचोर ठेकदार तपाईकै पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डको घरबेटी छन्, सांसद छन् नि भन्ने प्रश्नमा गृहमन्त्री बादलले हाँस्दै भने, अहिले तपाईले उठाएको मात्र नभएर सबै ठेकदार घरधनी नै हुन् । घर सबैको छ ।’
निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयको भएको भन्दै गृहमन्त्री बादलले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आफ्नो मन्त्रालयले सहयोग मात्र गरेको बताए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पु्ष्पकमल दाहाल प्रचण्डको घरधनी शारदाप्रसाद अधिकारीले काठमाडौं वरपर दर्जनौं ठेक्का लिएर समयमा काम पूरा गरेका छैनन् ।
पूर्वआईजीपी रमेशचन्द ठकुरी सर्वोच्चमा उपस्थिति
बंगलादेशी सेनाप्रमुख स्वदेश फर्किए
गृहमन्त्रीले भने –‘देशीविदेशी शक्ति अस्थिरता बढाउन क्रियाशील भइरहेकाले’ सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिने
प्रदेश ७ को राजधानी गोदावरी, नाम सुदूरपश्चिम पारित
निर्मला हत्या प्रकरणः डीएनए अमेरिकामा परीक्षण गरिने
प्रहरीको सफलताः १३ वर्षअघि हेमकार परिवारसहित ५ जनाको हत्यामा संलग्न पक्राउ
छैटौं प्रधानसेनापति अन्तर्राष्ट्रिय महिला फुटबलः प्रदेश सात विजयी